Tun Tun's Photo Diary: Lee Min Ho in Singapore
စင်ကာပူမှာ သူ.ပရိတ်သတ်တွေ တော်တော်များပါတယ်။ Mall တခုလုံးလူတွေ ပြည့်လျှံနေအောင် ဖြစ်သွားတယ်။ ကုလားထိုင်နဲ.လာကြည့်တဲ့သူနဲ.၊ မှန်ဘီလူးနဲ. လာကြည့်တဲ့သူနဲ.၊ နေရာလုလို. ရန်ဖြစ်တဲ့သူတွေကို ကြည့်ပြီး ပြုံးမိပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်ကလဲ အစောကြီးလာတာမဟုတ်လို. နောက်ဆုံးတန်းလောက်မှာပဲ ရပ်ပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်ခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့် Zoom Lens ပါသွားတော့ stage နဲ. ဝေးနေပေမယ့် ရိုက်ရတာ တော်တော်လေး အဆင်ပြေပါတယ်။
Lee Min Ho က ပိုစတာ တွေ ထဲမှာ နွဲ.နွဲ.လျလျ ပုံပေါက်နေတာ ကို သတိထားမိတယ်။ ဒါပေမယ့် သူက အပြင်မှာ ပိုပြီးတော့ ကြည့်လို.ကောင်းပါတယ်။ ယောင်္ကျားပို ပီသတဲ့ ပုံပေါက်တယ်ဆိုပါတော့။ Stage ပေါ်မှာ သူ.ရဲ. Fan တွေ နဲ. Game တွေ ဆော့တယ်။ OSIM ၃၅ နှစ်အထိမ်းအမှတ် မွေးနေ.သီချင်းဆိုတယ်။ Osim ၀န်ထမ်းတွေ နဲ. ဓါတ်ပုံရိုက်တာတွေ ကို တွေ.ခဲ့တယ်။ အပြီး ထိစောင့်ကြည့်ရမှာ ပျင်းတာနဲ. ဒီလောက်ပဲ ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။
at 10/10/2014 05:05:00 AM